Caritas Masar - UNHCR Egypt
Adeegyada Baahiyaha Asaasiga ah
Cabashooyin/ Codsiyada Ogolaanshaha/ Codsiyada Racfaanka ee Lacagta & Caawinaada Raashinka
UNHCR waxa ay gargaar bini’aadantinimo siisaa qaxootiga iyo magangalyo-doonka aadka u nugul oo keliya muddo xaddidan. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan barnaamijka iyo/ama codsiyada la xiriira cabashooyinka, ergada iyo codsiyada rafcaanka ee lacag caddaan ah, fadlan la xiriir Caritas.
Fadlan wac 15946
Laga bilaabo Isniinta ilaa Jimcaha: 8:30 – 15:30
Adeegyada Dadka leh Baahiyaha Gaarka ah & Caawimaadda Deg-degga ah
Caritas sidoo kale waxay bixisaa gargaar degdeg ah haddii ay dhacdo geeri, iyo adeegyada dadka baahiyaha gaarka ah qaba iyo waayeelka. Caawimada degdega ah waxa kale oo lagu bixiyaa mashruuca “Dadka Baahiyaha Gaarka ah qaba”:
Qahira: 01279760329/ 01279760318/ 02 3867 366
Isniin – Jimca: 8:30 – 15:30
Maalinkasta marka laga reebo Jimcaha iyo Axadda: 8:30 – 15:30
Axad – Khamiis: 9:00 – 16:00
WhatsApp Aleskandriya & Damaayita: 01118897564
Ilaalinta Caruurta/Caawinta iyo Guriyeynta Caruurta aan wehelka haysan iyo kuwa qoyskooda ka go’ay
Caritas waxay taageertaa UASC. Ka dib diiwaan gelinta UNHCR, cunuga waxaa la socodsiin doona Kooxda Ilaalinta Carruurta ee UNHCR isla maalintaas oo ku saabsan hay’adda CP ay sameyn doonto qiimeynta danahaaga ugu wanaagsan (BIA). Kaliya BIA ka dib, ayaa lagugu wargelin doonaa marka aad u baahan tahay inaad aado Caritas Garden City si aad uga baaraandegto kaalmadaada dhaqaale. Fadlan hubi inaadan dhaafin taariikhda ballanta kaalmada maaliyadeed; haddii kale fadlan horay u ogeysii shaqaalaha kiiskaaga. Caritas waxay kaloo siisaa taageero guriyeynta caruur aan lala socon oo kala maqan.
Qahira: 27961771, 27964441
Isniin – Jumca: 8:00 -15:30
Xaaladaha Xadgudubyada ku Salaysan Galmada
Rijeetooyinka Daryeelka Caafimaadka Asaasiga & Daawooyinka Bil kasta ah
6 October: 011 2988 4420/ 02 3889 7129
Fillada 48/8, Xaafadda 8, Mujaawarada 2aad
Maalinkasta marka laga reebo Jimcaha iyo Axadda: 8:30 Subaxnimo – 3:30 Galabnimo
Garden City: : 8 WadadaAbdel-Latif Bolteya., eek a danbeesa Hoteelka Four Seasons
02 2796 1771/ 02 2769 4441
Maalinkasta marka laga reebo Jimcaha iyo Axadda: 8:30 Subanimo – 3:30 Galabnimo
02 2386 7366/02 2386 7367/
02 2386 7368
011 2988 0084/ 011 2988 0223
Aleskandriya: 0127726477/ 01120077088
10 Wadada Talaat Noman, Saldhigga E-Raml
Kilo 21, ee Kadanbeeya Isbitaalka El-Asafra gharb
Isniin – Arbaco: 8:30 – 15:30
Damaayita: 01122000782/ 01207937255
Dhismaha 81/21, Xaafadda 1aad, Mujaawarada koowaad ee ku xigta
Axad – Khamiis: 8:30 – 15:30
Wadada El-Imam Mohamed Abdo, ee marta Qanat El-Suez
Isniin: 8:30 – 15:30
Adeegyada Bulsho iyo Naf ahaaneed
Adeegyada Hab Nololeedka
Maalinkasta marka laga reebo Jimcaha & Axadda: 8:30 – 15:30
Caritas Masar bogga Facebook-ga